Marcelo oo ka hadlay mustaqbalka saaxiibkiis Francisco Isco ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Marcelo oo ka hadlay mustaqbalka saaxiibkiis Francisco Isco ee kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 19 Dis 2018. Daafaca reer Brazil Marcelo ayaa ka hadlay mustaqbalka saaxiibkiis Francisco Isco ee garoonka Santiago Bernabéu, kadib markii ay soo baxeen warar ku aadan inuu ka tagayo kooxda Real Madrid.
30 jirkan ayaa tilmaamay in Francesco Isco uu heysto xirfado heersaro ah, isla markaana uu sii joogi doono kooxda Real Madrid.
“Waxaan wada ognahay in Francesco Isco uu yahay ciyaaryahan aad u wanaagsan ee leh xirfado aad u wanaagsan, waxaa xaqiiqo ah inuu ku noolaa xaalad kale”.
“Mararka qaar wuxuu ciyaarayay kulan dhameystiran, halka mararka qaar uu ciyaari jiray daqiiqado yar, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah in Real Mardid uu ugu dagaalamayo ilaa iyo heer dhimasho sida ciyaartoyda kale”.
Intaas kadib Marcelo ayaa wuxuu ka hadlay shaqo ka ceyrinta maanta lagu sameeyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
“Waxaan halkan u joogaa inaan ka hadlo koobka Club World Cup, balse waxaan kaga mahad celinayaa wax walba uu u soo qabtay kooxda Real Madrid”.
Macelo ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay wararka ku aadan in Jose uu ku laabanayo garoonka Santiago Bernabéu. “Ma jiraan waxaan kaga jawaabo arintan”.
Sidoo kale difaaca reer Brazil Marcelo ayaa wax laga weydiiyay in Zidane lala xiriirinayo shaqada tababarka ee kooxda Manchester United wuxuuna kaga jawaabay:
“Zidane waqti gaaban ayuu isku muujiyay kooxda Real Madrid, wuxuuna awoodaa inuu leeliyo koox kasta ee caalamka ah”.
“Waxaan dareemayaa inaan ku raaxeesanayo Barcelona marka loo fiiriyo Germany” - Ter Stegen